Platform Ahịa Ahịa Sudan na -enweta $ 5 nde site na Fawry
Platformlọ ahịa ahịa ahịa Sudan na -echekwa $ 5M site na Fawry
Fawry na -emebe mmekorita dị mkpa na ikpo okwu ndị Sudan nwere anya iji bulie usoro teknụzụ gafere Egypt
Fawry, onye isi ndị Egypt na-eweta azịza e-ịkwụ ụgwọ yana ọrụ ụlọ akụ dijitalụ, kwupụtara taa na ọ mechiela itinye ego na itughari, Usoro mgbasa ozi ịntanetị kachasị ukwuu na Sudan na ahịa, iji nyere aka wulite usoro fintech ọhụrụ, Cashi.
Fawry enwetala oke usoro dị mkpa na ụlọ ọrụ njigide alsoug.com/Cashi, na -aka akara ntinye ego isi ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ na mpụga ahịa ụlọ nke Egypt.
Ntinye ego a na -abịa dịka akụkụ nke ego izizi ego isi obodo Sudan. Fawry rụrụ ọrụ dị mkpa n'ịhụ na ihe ịga nke ọma nke USD 5m gburugburu, yana ọnụnọ ụlọ ọrụ ahụ na -akpali itinye aka site na ndị egwuregwu VC Western ndị ọzọ.
Dị ka onye na-etinye ego na usoro ego, Fawry na-ezube iji usoro teknụzụ teknụzụ akara ọcha mee ogologo oge ndekọ ya iji nyere ikpo okwu aka ịgbasa n'ọtụtụ, ịkwalite ọrụ nnweta ahịa nke ikpo okwu, na-emezigharị ụzọ ọ ga-aga ahịa, yana ịnye nghọta bara uru nke na-enye ozi. atụmatụ dị elu n'ofe akụkụ azụmahịa niile.
Itinye akwụkwọ maka enyemaka CBN N500M TIES
Nigerian Fintech Brass mechiri $ 1.7M Gburugburu Ego
Ndị ọchụnta ego Afrịka 26 na-eto eto ahọpụtara maka Mmemme Nrite Anzisha Afọ atọ
FairMoney nke Naijiria nwetara ego ọzọ
Ndị otu ndị na-azụ ahịa teknụzụ nke ụwa hiwere ntọala na 2016, alsoug bụzi onye na-ahụ maka ịntanetị ndị ahịa Sudan na nnukwu ahịa dijitalụ ya.
Alsoug bụ otu n'ime ngwa ndị Sudan ebudatara na ngwa ngwa Google Play yana nbudata nde abụọ yana ọ bụ ikpo okwu ebe ndị na -ere ahịa nwere ike depụta ihe niile site na ezigbo ụlọ na ụgbọ ala ruo ọrụ na ngwa ahịa.
N'agbanyeghị oke ndọrọndọrọ ọchịchị na akụ na ụba nke Sudan na-enweta ka ọ na-aga na mgbanwe mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ikpo okwu etolitela ngwa ngwa kemgbe 2016, na-egosipụtakwa otu ndị ọkachamara nwere oke nke ndị mmepe ụlọ, mkpuchi zuru oke site n'aka ndị otu nọ n'ala, yana dị ka isi mmalite akụ na ụba Sudan na -ekwe nkwa.
N'ịga n'ihu, na iwulite mmekọrịta dị n'etiti ya na Fawry, alsoug ga -agbasawanye onyinye ọrụ ya site na iwulite netwọkụ ịkwụ ụgwọ ọhụrụ nke nwere ike ijere ndị ahịa n'ofe Sudan, otu n'ime mba kachasị na kọntinent Africa.
N'ikwu okwu banyere azụmahịa ahụ, Fawry CEO Eng. Ashraf Sabry kwuru: “Obi dị anyị ụtọ na anyị na -amalite mmekọrịta anyị na alsoug, otu n'ime atụmanya kacha atọ ụtọ na Sudan na onye ndu Sudan na ihe ọhụrụ.
Nke a bụ mbubata mbụ anyị na mpụga Egypt n'ime afọ iri na atọ anyị ji arụ ọrụ, anyị kwenyesikwara ike na akụkọ anyị na alsoug na Cashi ga -abụ nke pụrụ iche.
Ntinye ego Fawry na alsoug na -ewepụta atụmatụ anyị ịbanye n'ahịa mba ụwa na -enweghị nchekwa site na iji teknụzụ anyị na ijikọ ndị egwuregwu mpaghara siri ike.
Ntinye ego a ga -enye anyị ohere ịgbasawanye akara ukwu anyị na Africa wee nyefee ahụmịhe anyị nwetara n'ahịa Egypt siri ike na Sudan gbara agbata obi, akụ na ụba nwere nnukwu ike n'ọtụtụ akụkụ yana nnukwu talent nke azụmaahịa.
Ka ọ dị ugbu a, mmekorita atụmatụ nke Fawry na alsoug na-ahapụ ya nke ọma ka ọ nyere aka duzie mwepụta nke usoro ịkwụ ụgwọ mba niile, njirimara nke Fawry jisiri ike na ya site na ikpo okwu teknụzụ siri ike, nke siri ike.
Onye nnochite anya Alsoug na CEO Tarneem (Nina) Saeed kwuru okwu ndị a: "Ntinye ego a bụ akara dị mkpa ọ bụghị naanị maka itughari, kama maka oghere teknụzụ ọhụrụ na Sudan n'ozuzu ya, bụ nke mechiri n'ahịa isi obodo ụwa ruo taa.
Enwere m olile anya na itinye ego a bụ nke mbụ n'ime ọtụtụ yana na nnukwu ike nke ngalaba teknụzụ na Sudan ka emezuru nke ọma n'afọ ndị na -abịanụ.
Anyị na -atụ anya ka anyị na Fawry na ndị na -ekenye usoro ọhụrụ anyị na -arụkọ ọrụ, ka anyị gaa n'ihu gbasaa site na nkewa na oghere n'ọma ahịa ruo ịkwụ ụgwọ. Anyị ga -ewu usoro ịkwụ ụgwọ nke ga -ebunye ndị Sudan niile ego. "